Logo tsara amin'ny ratsy | Famoronana an-tserasera
Na dia tsy matetika aza izy ireo no fahita matetika, rehefa miseho izy ireo dia matetika no misarika ny sain'ny mpijery mandritra ny segondra maromaro ary manome ny dikany sy manome lanja ny faharanitan-tsaina naneho hevitra azy ireo. Hatramin'izao dia nanao fanangonana manokana aho sary ratsy satria amiko dia ohatra mazava izy ireo amin'ny tsy mazava sy ny fahatsapana tsiro izay azon'ny mpamorona sary. Araka ny fantatrao, ny tena mampiavaka an'ireto logo ireto dia ny tsy fijerin'izy ireo antsika raha ny fahitana azy voalohany, fa raha ny tena izy ao ambanin'ny habaka banga sy foana ary "tsy hita" dia afenin'izy ireo ny endrika iray, toa ny litera iray izay miafara manome lanjan'ny teny. Io no famaranana tonga lafatra amin'ny ankamaroan'ny marika satria manentana ny tanora, hadalana ary indraindray mahatsikaiky.
Tsy haiko raha nanandrana namolavola sary famantarana an'ity karazana ity ianao, fa ianareo izay nanandrana dia hahafantatra mialoha fa mety ho sarotra be izy ireo hampivelatra satria avo roa heny ny asa. Tsy vitan'ny hoe mila mahita famolavolana hevitra mifanaraka amin'ny soatoavina, ny hatsaran'ny orinasa ary ny marika isika, fa tsy maintsy miasa amin'ny lafiny roa koa isika, hikarakara ny toerana izay tsy ampiasantsika ka ao anatin'ny iray segondra ny famakiana azy dia manambara ny dikan'ny asantsika. Eto aho avelako ianao miaraka amina safidy mahafinaritra Fango negatif 28 tena tsotra fa amiko manokana dia toa tsara izy ireo ary tena tsara hikatonin'izy ireo amin'ity herinandro faran'ny volana Febroary ity miaraka amin'ny tsiro tsara ao am-bava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Logo tsara amin'ny ratsy